ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့ လမ်းမှာ ကားစစ်ခံရပြီး ဓားသုံးချောင်းမိသွားတဲ့ သူ့ရဲ့အဖြစ်ကို ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ထူးအယ်လင် – Shwe Nay Chi
ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့ လမ်းမှာ ကားစစ်ခံရပြီး ဓားသုံးချောင်းမိသွားတဲ့ သူ့ရဲ့အဖြစ်ကို ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ထူးအယ်လင်
ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့ လမ်းမှာ ကားစစ်ခံရပြီး ဓားသုံးချောင်းမိသွားတဲ့ သူ့ရဲ့အဖြစ်ကို ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ထူးအယ်လင်း
အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းတစ်ယောက် လက်ရှိမှာ ပရဟိတအ လုပ်တွေကို အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသူ တ စ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော အခြေအနေများကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေကြသော ပြည်သူများကိုကိုယ်တိုင်သွာ းရောက်ကာ လှူဒါန်းပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းလောက်ကလည်းကချင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများသို့ စားနပ်ရိက္ခာများ သွားရောက် ကူ ညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ညက ထူးအယ်လင်းရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွင် ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့ လမ်းမှာ ကားစ စ်ခံရပြီး ဓားသုံးချောင်းမိသွားတဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကို ပြန်လည်ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ ခေါင်လန်ဖူးဒေသတွင် သွားကူညီတုန်းက တောရှ င်းဖို့အတွက် ဓားအရှည်သုံးချောင်းကို ပူတာအိုဈေးကနေ ဝယ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကားထဲကနေ မထုတ်ထားမိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသွားတဲ့အချိန်တွင်အကျိုးအ ကြောင်း ရှင်းပြလိုက်တာကြောင့် ကံကောင်းထောက်မစွာ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာကိုလည်း အခုလို ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
” ခေါင်လန်ဖူးဒေသ သွားကူညီတုန်းက တောရှင်းဖို့ ဓားရှည်သုံ းချောင်းကို ပူတာအိုဈေးကဝယ်ထားပြီး အလှူကိစ္စပြီးတော့ ရန်ကုန်အပြန် ဓားသုံးချောင်းကိုမေ့ပြီး ကားထဲထည့်ထားပြီး မထုတ်မိတာ ဂိတ်ကစစ်တော့ ၁၉/င နဲ့ ငြိတော့မလို့ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ အကြောင်းအကျိုးရှင်းပြ ပြောပြလိုက်တာ ပြ န်လွှတ်လိုက်ပေးတယ်ကျေးဇူးပါဗျာ။
စစ်ခံထိတာ ထောက်ကြန့် အမှတ် ၃ လမ်းဆုံဂိတ် ?အိမ်း လှသိန်းတို့ သတိထား ကြပ်ကြပ်မေ့ကြပ်ကြပ်မေ့ …အကုန် ရပ်ကု န်မယ်???” ဆိုပြီး သူကံကောင်းခဲ့ပုံကို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကြောင့် နေရာမျိုးစုံတွင် စစ်ဆေးရေးတွေ များစွာ ရှိနေတာ ဖြ စ်ပါတယ်။အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ခရီးထွက်ရမယ်ဆိုပါက အန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့် အရာမျိုးကို အိမ်တွင်သေချာစစ်ဆေးပြီးမှသာ စထွက်သင့်ကြောင်း သတိပေးလိုက်ပါရစေ။
ရန္ကုန္ျပန္လာတဲ့ လမ္းမွာ ကားစစ္ခံရၿပီး ဓားသံုးေခ်ာင္းမိသြားတဲ့ သူ႔ရဲ့အျဖစ္ကို ျပန္လည္ေျပာျပလာတဲ့ ထူးအယ္လင္း
အဆိုေတာ္ ထူးအယ္လင္းတစ္ေယာက္ လက္ရိွမွာ ပရဟိတအ လုပ္ေတြကို အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ တ စ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကိုကိုယ္တိုင္သြာ းေရာက္ကာ လႉဒါန္းေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းေလာက္ကလည္းကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ စားနပ္ရိကၡာမ်ား သြားေရာက္ ကူ ညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။မေန့ညက ထူးအယ္လင္းရဲ့ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ရန္ကုန္ျပန္လာတဲ့ လမ္းမွာ ကားစ စ္ခံရၿပီး ဓားသံုးေခ်ာင္းမိသြားတဲ့သူ႔ရဲ့အျဖစ္ကို ျပန္လည္ေျပာျပလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူကေတာ့ ေခါင္လန္ဖူးေဒသတြင္ သြားကူညီတုန္းက ေတာရွ င္းဖို႔အတြက္ ဓားအရွည္သံုးေခ်ာင္းကို ပူတာအိုေဈးကေန ဝယ္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကားထဲကေန မထုတ္ထားမိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသြားတဲ့အခ်ိန္တြင္အက်ိဳးအ ေၾကာင္း ရွင္းျပလိုက္တာေၾကာင့္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တာကိုလည္း အခုလို ေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
” ေခါင္လန္ဖူးေဒသ သြားကူညီတုန္းက ေတာရွင္းဖို႔ ဓားရွည္သံု းေခ်ာင္းကို ပူတာအိုေဈးကဝယ္ထားၿပီး အလႉကိစၥၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္အျပန္ ဓားသံုးေခ်ာင္းကိုေမ့ၿပီး ကားထဲထၫ့္ထားၿပီး မထုတ္မိတာ ဂိတ္ကစစ္ေတာ့ ၁၉/င နဲ႔ ၿငိေတာ့မလို႔ ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ႔ပဲ အေၾကာင္းအက်ိဳးရွင္းျပ ေျပာျပလိုက္တာ ျပ န္လႊတ္လိုက္ေပးတယ္ေက်းဇူးပါဗ်ာ။
စစ္ခံထိတာ ေထာက္ၾကန႔္ အမွတ္ ၃ လမ္းဆံုဂိတ္ ?အိမ္း လွသိန္းတို႔ သတိထား ၾကပ္ၾကပ္ေမ့ၾကပ္ၾကပ္ေမ့ …အကုန္ ရပ္ကု န္မယ္???” ဆိုၿပီး သူကံေကာင္းခဲ့ပံုကို ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိျွဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေနရာမ်ိဳးစံုတြင္ စစ္ေဆးေရးေတြ မ်ားစြာ ရိွေနတာ ျဖ စ္ပါတယ္။အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ခရီးထြက္ရမယ္ဆိုပါက အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမယ့္ အရာမ်ိဳးကို အိမ္တြင္ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွသာ စထြက္သင့္ေၾကာင္း သတိေပးလိုက္ပါရေစ။
လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတဲ့ စစ်တပ်ဘောမ ယုန်လေးကို ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြင့် ဒဲ့ဆဲချလိုက်တဲ့ မင်းမော် ကွန်း။
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာတောင် အနားမှာအတူမရှိပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်